﻿Download I-Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – IsiXhosa from Official Microsoft Download Center
Ngokusebenzisa i-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa, abasebenzisi bangasebenza kuhlelo lolwimi lofakelo lokuqala oluxhaswayo losetyenziso lwe-Office baze babone imiyalelo nokhetho lolo setyenziso - IsiXhosa.
Ebudeni bokufakelwa kwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2013, iifayile ezenza bakwazi abasebenzisi ukuba batshintshe ulwimi lweintafeyisi yomsebenzisi bakopelwa kwidiski eqinileyo yendawo. Emva kofakelo, amandla nokhetho lonxibelewano lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - IsiXhosa luyafumaneka ngaphakathi kusetyenziso lwe-Office 2013 nosetyenziso lwe-Microsoft Office 2013 Language Settings.
Qaphela: Sicela uqinisekise ukuba ufakela i-Service Packs zakutshanje zeNkqubo yokuSebenza ukuqinisekisa inkxaso yolwimi lwakho.
Qaphela: Uncedo alukwazi ukutshintshelwa kulwimi lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – IsiXhosa. Uncedo luya kusoloko lukulwimi lokufakela lwakho lokuqala.
Soloko useta uncedo lokubonsa kuluhlu lokwehlela ezantsi kulwimi lwesiseko.